XEERARKA UUR-QAADISTA EE GUDUUD CAGAARAN (CAADI AH): TALOOYIN KA YIMID BANNAANKA U KHIBRAD LEH - KU DHALIDA BY GOOYN
Qarsoonaanta taranta guul leh ee ash buur (cas)
Rowan - warshad aad u qurux badan, marka lagu daro qurxinta mar kasta oo sanadka ah. Xilliga kuleylka, waa ubaxyo midab leh oo ubax leh ubaxyo midab leh oo midab leh oo leh caraf udgoon; xilliga dayrta - sariiro cajiib ah oo caleenta ah: laga bilaabo kulul huruud ah oo casaan ah; xilliga jiilaalka, kooxo guduudan oo qurux badan oo beruud ah.
Haddii aad doonayso inaad dacaayado dhaqaale faa'iido leh oo qurux badan oo ku saabsan sawirkaaga, waxaad ka helaysaa maqaalkan waxaad ku baran doontaa sida loo beeray qoryaha, laga bilaabo laanta, koritaanka xididka. Talooyinka faahfaahsan ee qodobkan ayaa kaa caawin doona inaad go'aansato habka ugu haboon ee aad u dacaayadeyso warshad.
Beerta Rowan Seed
Rowan caadi ahaan si sahlan ayey u koraan abuurka. Laga soo bilaabo miro dhamaystiran, tuujin abuurka, maya oo qallalan. Seeds waxaa lagu kaydiyaa ciid qoyan meel qabow.
Guga, ee grooves leh lakabka lebiska waxaa lagu beeray qoto dheer oo ah 8 cm, ku daboolay ciid nadiif ah oo leh lakabka iyo sicirka badh. Ilaa 250 xabo ayaa lagu beeray halkii mitir labajibbaaran. Ka dib markii la beero, ciidda waa la dajiyay oo la waraabiyey iyada oo loo marayo shaandho wanaagsan.
Marka laba baal oo caleemo ah ay ka muuqdaan geedo, way qafiifsan yihiin, ka tagaan masaafada saddex santiimitir. Khafiifinta soo socota waxaa lagu fuliyaa iyadoo ay joogaan shan caleemo, oo ka tagaya lix sentimitir inta u dhaxaysa caleemaha. Guga soo socda ayaa ka baxaya geedaha ugu xoogan oo leh masaafada ugu yaraan 10 cm midba midka kale.
Daryeelka geedaha cagaaran marka la koray abuurka wuxuu ka kooban yahay qoyaan ciid, loosening iyo jaridda dhirta. Guga waxaa la bacrimiyey daboolan organic: 5 kg dufan halkii mitir labajibbaaran. Geedaha cusub ee koray waxaa lagu beeray meel joogto ah xilliga dayrta sanadka labaad.
Waa muhiim! Si aad u hesho goosashada munaasibka ah, waxaa lagula talinayaa in la beero dhowr noocyo kala duwan.
Dareemida Rowan by gaduudan casaan
Roogga caadiga ah marka la faafiyo adoo raacaya ayaa ugu haboon habka kala jaridda. Bishii Janaayo, guntinta sanadka hadda waa la gooyaa, waxay ujoogaan rucubood waxayna ku dhererayaan ciidda ama ciid si qoto dheer ah 15 cm.
Guga hore, seedling sanadlaha ah ayaa loo doortaa stock ah, qoday iyo nadiifiyey ee clods ciidda. Qaybta sare ee xididka waxay ku kala qaxayaan 3 cm qoto dheer. Baalal xoog leh oo leh burooyinkeeda la soo saaray ayaa la doortaa, laba lakab oo jajab ah ayaa la sameeyaa qaybta hoose ee biqilaha si ay ugu jajabiso xajmiga wareegga. Qaybta sare ee jarida ayaa la gooyaa xagal qiyaastii kor ku xusan.
Xuubka waxaa la dhigayaa meel isku xiran, isku xidhka waxaa lagu duudduubay filim, dusha sare ee lafdhabarta waxaa lagu daaweeyaa garoonka beerta. Geedo diyaarsan diyaar u yihiin lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo si ay iskuduubka u ah dusha dhulka. Sand iyo peat waxaa loo isticmaalaa ciid ah qaybo siman. The seedling waa in uusan qalajin, waxaa lagama maarmaan ah in ay qoyaan ciidda iyo hawada. Ka dib markii la soo afjaro ka dib, seedling waxaa lagu beeray meel joogto ah oo dhulka hoostiisa ah, jarida sprouts on stock.
Wixii beerashada ash buurta waa ku habboon tahay habka faafinta by gooyn - Cagaar iyo lignified. Xulashada waxaa la siiyaa gooyn cagaaran, tan iyo dhirta hal sano jir ah horeba waxay leeyihiin nidaam xidid adag.
Ma taqaanaa? Waqtiyada jaahwareerka, ash buur ayaa mawduuc ka ahaa qabiilo badan oo kala duwan: Celts, Slavs, Scandinavians. Waxaa loo tixgelin jiray taliyihii jinniyadooda sharka, sixirka; oo lagu sharfay sida ay u ilaaliyaan dagaalyahannada. Daraasado cajiib ah ayaa laga sameeyay ash buur.
Gooyn go'ay maalmaha ugu horeeya ee xagaaga. Si loo yareeyo cirku wuxuu keenay natiijo wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo gooyo gooynta. Dhererka gooyuhu waa 10 ilaa 15 cm, caleemaha waa in ay sameeyaan burooyinkooda iyo dhowr caleemo, jarjar ayaa laga sameeyaa xagal.
Ka hor inta aan la beeri, qaybta hoose ee caleemaha ayaa ka hadhay dardar-samaynta qaabka rootiga loogu talagalay lix saacadood.
Inta lagu jiro wakhtigan, aqalka dhirta lagu koriyo ayaa la diyaarinayaa: ciid webiga dredged ayaa lagu shubay lakabka ilaa 10 cm si loo qodo oo lakabka lagu nadiifiyo ee ciidda.
Dhammaadka xagaaga, geedo waxaa lagu beeray aag kale oo soo koraya. Daryeelka geedo waxay tilmaamaysaa waraabinta adigoo ku buufinaya, hawada kululeynaya heerkulka sare.
Ka hor inta beerto geed safar ah on meel joogto ah gooynta qallafsan, tegaya aqalka dhirta lagu koriyo. Marka hore, filimka ayaa la saaraa dhowr saacadood, si tartiib tartiib ah ayuu u kordhiyaa waqtiga oo ugu dambeyntii u furan habeenkii.
Sida ugu dhakhsaha badan geedo qaadan xidid, taageerada aqalka dhirta lagu koriyo ayaa la saaraa iyo quudinta koowaad ee xeryaha macdanta nitrogen (30 g of ammonium nitrate 8 litir oo biyo ah) ayaa la fuliyaa. Ciidda ku wareegsan geedo ayaa laga nadiifiyaa haramaha iyo dabacsan. Dayrta soo socota, duurka qoryaha ayaa lagu beddelaa meel joogto ah.
Digniin! Rowan si dhakhso ah ayuu u koraa oo si firfircoon ayuu u kobcayaa, sidaa daraadeed, bacarinta iyo hannaanka qalliinka ayaa la sameeyaa wakhti gaaban.
Wixii dhalid ah ee gooyn qoryaha casaan ah qaadan caleemaha sannadlaha ah oo xoog leh laga bilaabo laba ama afar sano laamood.
Waxay gooyaan tobanka sano ee sanadka Sebtembar. Gooyntu waxay gooyeen dherer 15-20 cm, mid kastaana wuxuu noqonayaa shan qooyaan.
Soo saarista waxaa la sameeyaa isla maalintaas. In ciidda si toos ah qoday si beeray fogaan ah 15 cm u dhexeeya gooyn, inta u dhaxaysa saf - ilaa 70 cm Cagaaran waa la sameeyey, ka tago laba ku hari sare, mid ka mid ah dhulka. Gooynta ayaa la waraabiyaa, burburin carrada, huujinta hulalka iyo mulch oo leh peat. Si aad u guulaysiga iyo beddelaad dheeraad ah, ciidda waxaa si joogto ah qoyan iyo dabacsan.
Waa muhiim! Haddii sabab kasta oo beerto la fuliyo guga, ka hor ka hor waxaa gooyn ah lagu keydiyo ciid qoyan ee Maqsin.
Nafaqeynta lakabyada lafdhabarta
Wixii dhalid ah ee ash buur buur leh lakabyo ah horay loo diyaariyey jeexdin, caleemaha hal sano oo xoog leh ayaa qulqulaya. Samee nidaamka guga oo leh ciid wanaagsan oo kulul. Meesha ka hooseysa gooynta qoday oo laga nadiifiyey haramaha.
Caleemaha waxaa la dhigayaa jeexitaanka oo lagu riixay kumbuyuutar. Dusha sare ee cirifka caleemaha. Marka caleemaha ugu horeeya ee dhererka 10 sentimitir dhererkooda, waxay ku dhacaan hurdo badh. Nidaamku waa soo noqnoqonayaa marka caleemuhu gaadho 15 cm oo gaaban. Guga soo socda, lakabyada ayaa ka soocaya baadiyaha hooyada oo loo beddelaa meel joogto ah.
Rowan faafinta by suckers xididka cas
Sannad kasta hareeraha jirridda ayaa ku kora geedo badan oo rootan ah. Sprouts leh isticmaalka guusha loogu talagalay dhalmo xilliga guga. Si arrintan loo sameeyo, waa la gooyaa oo loo wareejiyaa dalool gooni ah si deg deg ah.
Ceelka uumiga ah waa inuu ahaadaa qoto dheer oo dhan ilaa 80 cm, masaafada u dhexaysa beerto waxay ilaa lix mitir u jirtaa. Ceelku wuxuu ka buuxsamaa isku darka diyaarinta: compost, carrada nafaqada ah ee qaybo siman, for qanjaruufo ash xaabada iyo superphosphate, laba majaraf ah ee digada qudhuntay. Ka dib markii ay beerto waxay si ba'an u waraabisay, jirida bartamaha waa la gooyaa saddexaad, caleemaha dhinaca gooyaa guga soo socda.
Xiiso leh Dhalinyaradu waxay dabooleen caleenta qoryaha buuraha cusub, iyada oo tixgelinaysa qofka talada u ah nolol farxad leh. Dareemaha iyo weelasha waxay ka samaysan yihiin qoryo rinjiga ah, dharna waxaa lagu rinjiyey juus ah oo miro ah.